GoodData: SaaS Inoda Bhizinesi Ruzivo | Martech Zone
Sevashambadziri, isu takazadzwa nedata. Nezuro chaiye ndanga ndichigadzira SEO kufambira mberi mushumo wakandiunza kubva chinzvimbo chekutevera, Dhata reWebmasters, Google Analytics data uye Hubspot kuisa metric yakakosha uye kuenzanisa kuburitsa kuti uone kuti yaive yechokwadi.
Business Intelligence (BI) mhinduro dzave dzakatenderedza munzvimbo ye Enterprise kwenguva yakati rebei uye dzaiwanzo kuve mutengi / server kuisirwa ine marefu ekushandisa macircuit… dzimwe nguva makore. Mhinduro yeBI yaizondigonesa kuburitsa iyo data kubva kune yega yeaya masisitimu uye nekuvaka yepakati repamhepo iyo inosefa, inogadzirisa uye inopa iyo data mune fomati inonyanya kushandiswa.
GoodData iri Software seSevhisi Bhizinesi Yehungwaru Software ine kugona kuunza akaparadzanisa data zvinhu, kukwiza iyo data, uye kushandisa madhibhodhi, makiyi ekuita zviratidzo (KPIs) uye nekuzivisa. Heano mutengi achitaura nekushandisa kweGoodData kugadzira mishumo uye metric zviri nyore. Ive neshuwa yekutarisa Chiteshi cheGoodData cheYouTube - ichipa matani ewebhu uye mharidzo pamusoro pekunyatso shandisa chikuva chavo.
Sezvakanyorwa pane yavo peji peji, hezvino zvakakosha zveGoodData:
Dashibhodhi uye Mishumo - Fungidzira data rako nemishumo yakanyatsogadziriswa yemakaneni kana ine simba uye madhibhodhi uchishandisa matafura epivot kana machati. Pivot pane kubhururuka nekukwiza mbeva. Tsanangura tsika uye kutonga-kwakavakirwa fomati matemplate, kudhonzera-mukati mukati kana kuyambuka maseru, tsanangura makoramu akaunganidzwa mumasekondi, tora pakarepo pepanhau redunhu matunhu kuburikidza nekumakisa mbeva, dhonza uye udonhedze machati ekiseti magadziriso uye udzore wega chitenderedzwa kutenderera.
Metric uye Key Performance Zviratidzo - GoodData inobvumira vashandisi kuti vawedzere simba remakumi mazhinji ematanho-akatsanangurwa. GoodData inogona zvakare kugadzira yakasarudzika metric iyo inonongedza yakasarudzika bhizinesi mamiriro, kutsanangura KPIs uye kuteedzera mashandiro kupokana nezvinangwa.
Kuongorora kweHoc Hoc - Ita ongororo inoteedzera pane yakatarwa-nguva mapfupa. Slice uye dhi data uchishandisa inonzwisisika "chii uye sei" interface uye tsanangura tsika uye yepasirese / yemunharaunda metric, mafirita uye zvimwe zvakawanda. Shandisa iyo firita mubatsiri kungoisa plug mune yakasarudzika, chinzvimbo, renji kana musiyano mafirita. Ita chii-kana ongororo kuburikidza nekutungamirwa kwekufambisa kana kudzika uye wakasviba ine simba asi inogona kuverengwa mitauro yemhando dzakasiyana.
Kubatana uye Kugovana - Shanda pamwe uye mugovane mapurojekiti, mishumo uye mhedzisiro pamwe nevavanoshanda navo uye manejimendi mune chaiyo-nguva. Tevera uye ongorora nhoroondo yeprojekiti. Annotate uye tag mishumo pane nhunzi. Koka vanhu muzvirongwa zvako kuti vakurukure uye vagovane kufambira mberi. Kurudzira kutora chikamu mune chaiyo-nguva. Embed kana email mishumo uye madhibhodhi uchishandisa kugovera zvinyorwa.
Mapurogiramu Akavakwa-Kare --GoodData maapplication anozvibatanidza otomatiki neakajairwa masosi sedhizina seGoogle Analytics, Salesforce neZendesk, uye sezvo ese achivakwa papuratifomu yeGoodData, unogona kuawedzera zviri nyore nekuwedzera data kana kugadzirisa metriki inoratidza yako yakasarudzika bhizinesi zvinodiwa.
Kana iwe uri online tekinoroji ine data, iwe unogona zvakare kuve a data mudiwa naGoodData. GoodData inopa kugona kugadzira yakakwana analytics chigadzirwa mumusika mukati memazuva makumi mapfumbamwe pasina hukuru hwekuedza. Vatengi vako vanowana kuzara kuzere kune ese eGoodData chikuva: pre-akavaka madhibhodhi, epamberi visualization, slice uye dice, tsika metric, kubatana pamwe nezvimwe.
Tags: bibusiness intelligencegooddataKushambadzira Webinarsaassoftware sebasa